အမှန်တရားပေါင်းချုပ်: ဦးညာဏသာရ(ခ)ဒေါက်တာချက်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားခဲ့တဲ့ သာဓကပို့စ်တစ်ခု
သူတော်ကောင်းတရားသည် မသူတော်တရားကို ကျော်လွှားနိုင်ရမည်..
ချက်ကြီးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (1)
&amp;amp;lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_8H9MwIF8RV8/S0ATC3nXFqI/AAAAAAAAAAk/pDRm_llPKRQ/S45/qqqqq.jpg" width="35" height="35" class="photo" alt=""&amp;amp;gt;
ချက်ကြီးကတော့ အတော်လေးခံနေရတယ်ကွာ....သူက ခံကောင်းနေလို့ထင်ရဲ့
ဒီ move မျိုး တင်နေသမျှတော့ ..ချက်ကြီးရေ .. မင်းလည်း ၀ဋ်လည်မယ်.. မင်း အမ ညီမ စတာတွေ တွေလည်း ဒီလို အတင်ခံနေရမယ် .. ၀ဋ်ဆိုတာ ဘ၀မကူးဘူး ။ကာလ၀ိပါက် နောက်ပိုးတက်ပါတယ် .. မင်းစာတတ်လောက်ပါတယ်..
4 January 2012 at 04:58
မာတုဂါမနဲ့ ဆက်ဆံပြီးရင် ပါရာဇိက ကျသွားပြီမို့ ဒီတစ်သက် ရဟန်း လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူး။ ချက်ကြီးက လူဖြစ်နေပြီ။ လုံးဝ ရဟန်းမဟုတ်ဘူး။ နီးရာလူတွေက သင်္ကန်းအတင်းချွတ်ခိုင်းစေချင်တယ်။
စဉ်းစဉ်းစားစား နဲ့ ဦးနှောက်သုံးပြီး တွေးကြပါဦးဗျာ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဟာ သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို သိက္ခာချပါ့မလား။တခြားဘာသာဝင်တယောက်ကသာ ဘုန်းကြီးပုံများတင်ပြီး ၊ဘာသာမတူသူများအပေါ် သိက္ခာချနေတာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ချက်ကြီးဆိုတာ သံဃာတော်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ဒုလ္လဘ ရဟန်းလည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။သံဃာဖြစ်စေ၊လူဖြစ်စေ မိမိကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေမယ့် ပုံများ၊နာမည်များ၊အရေးအသားများ လုံးဝ လုပ်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။(နိုင်ငံတကာက အင်တာနက်တွေပေါ် မကြာမကြာ ပါလာတတ်တဲ့ ဘုရားရုပ်ပွားတော်များကို မထီမဲ့မြင် ပြုမူ ပြောဆို သရုပ်ဆောင်ကြသူများဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မဟုတ်ကြပါ။တခြားဘာသာ ကိုးကွယ်သောသူများဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ သိရှိနိုင်ကြပါတယ်။) ဦးနှောက်ဖြင့်စဉ်းစား၍ ယုံကြည်ကြ။ချင့်ယုံကြ။။ကော်ပီကူး၍ ဖော်ပြကြပါလို့။((အခုလို ခင်ဗျားတို့ က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် စွပ်စွဲလေလေ..ချက်ကြီးဘလော့ကို တကယ်လုပ်နေတဲ့ ငနဲက ကွယ်ရာကနေ ပြုံးရယ်နေမှာ သေချာတယ်။))
online ဆိုတဲ့ ပညာတတ်အများစု စုဝေးရာ နယ်ပယ်ကိုရောက်လာကြပါလျှက်နဲ့ပညာရေးမိသားစုစိတ်ထားကြပြီး သိက္ခာရှိတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ တိုးတက်မှုတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်တိုင်တိုင်ပင်ပင်နေကြပါလား
Kyaw Ye Htut said...
စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာလေးရှိရင် ဒီနေရာမှာ ပေါက်ကွဲခဲ့ကြပါ
ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုတာ ဘုနုးကြီးတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းေ...
Copyright 2009 အမှန်တရားပေါင်းချုပ်. Blogger Templates created by Deluxe Templates. Wordpress by 7graus